ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေအောက်မှာ အခါခါကျရှုံးရတဲ့အကြောင်း ကြည်နူးစွာပြောပြလာတဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ – XB Media Myanmar
ဝေဖန်မှုတွေကြားက နှစ်ယောက်သား လက်တွဲဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွှေမှုံရတီက “ဒါကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဓိကတော့ သည်းခံတာပေါ့ အရေးကြီးဆုံးက နှစ်ယောက်က နားလည်ပေးမှုတွေလည်း ဘာမှမလိုဘူး။ သည်းခံ တာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ချစ်တာ ဂရုစိုက်တာ။ အဲ့တာတွေ အားလုံးက တစ်လောကလုံးနဲ့ ၂ယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်တော့ဘူး ၂ယောက်ဖြစ်သွားပြီ တစ်လောကလုံးနဲ့ ၂ယောက်ဖြစ်နေရင်တောင်မှ လက်ကလေးကိုင်ထားပြီး အားရှိနေကြတာ အသားလေးထိရင်တောင် ချိုတယ်ဆိုတာမျိုး။”လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ရွှေမှုံရတီက 🎁love is colourful ❤️ my husband is the best 😭 By the way when you care about me! I really falling in u ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကြည်နူးနေတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ရွှေထူးတို့ ဇနီးမောင်းနှံရဲ့ Ro ဆန်နေဲ့ပုံရိပ်လေးတွေက်ိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဝဖေနျမှုတှကွေားက နှဈယောကျသား လကျတှဲဖွဈခဲ့တာနဲ့ ပတျသကျပွီး ရှမှေုံရတီက “ဒါကတော့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အဓိကတော့ သညျးခံတာပေါ့ အရေးကွီးဆုံးက နှဈယောကျက နားလညျပေးမှုတှလေညျး ဘာမှမလိုဘူး။ သညျးခံ တာတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ပွီးတော့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျခဈြတာ ဂရုစိုကျတာ။ အဲ့တာတှေ အားလုံးက တဈလောကလုံးနဲ့ ၂ယောကျဖွဈသှားတာပေါ့ တဈယောကျတော့ မဟုတျတော့ဘူး ၂ယောကျဖွဈသှားပွီ တဈလောကလုံးနဲ့ ၂ယောကျဖွဈနရေငျတောငျမှ လကျကလေးကိုငျထားပွီး အားရှိနကွေတာ အသားလေးထိရငျတောငျ ခြိုတယျဆိုတာမြိုး။”လို့ ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ ရှမှေုံရတီက 🎁love is colourful ❤️ my husband is the best 😭 By the way when you care about me! I really falling in u ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးကွညျနူးနတေဲ့ ပုံလေးတှတေငျခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးအတှကျ ရှထေူးတို့ ဇနီးမောငျးနှံရဲ့ Ro ဆနျနေဲ့ပုံရိပျလေးတှကေိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။